Papa Pear Saga Thwebula
Kuyini Papa Pear Saga?
Papa Pear – Amazinga 23 – 30
February 13, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
I strait sokugcina salolu sigaba uyaqhubeka esinika efudumele up for the izigaba ezayo, layo amazing kangakanani ikhono at ukulawula papa noma ngisho 'papas’ nabantu abaningi ebhodini ngesikhathi! Phambili!
Wafaka Under: Papa Pear Saga
Papa Pear Amathiphu amazinga Okunzima
February 11, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Indlela esondela ngalinye lizinga Papa Pear kunomthelela omkhulu kwi empumelelweni yakho ekugcineni noma ukuhluleka. Nakuba izinhloso ngayinye ezingeni icacile indlela engcono lapho ukuhlangabezana nalezi zinhloso kuhlala kancane more obscure. Ngezinye izikhathi kukhona izinkomba ezimbalwa, Interesting ukuthi ungafunda kulabo abaye nenkani balwa ngaphambi kwakho!
Yazi uma 'ashise’ futhi nini ukuze kuphole leso sizzle – Flaming uPapa zinhle, ba singadambisa eziwuhlupho izithelo spiky ukuthi ayeke papa wakho kubanda, angabawa kuvuthe ngokusebenzisa chilis, amajikijolo, acorns & izaqathe esheshayo futhi kubalulekile ukuze crisping up ipea pods ukuthi basakaza kuncane uhlevane ijubane green endleleni yakho. Nokho ukwazi isikhathi sifuna ngentshiseko umlilo izikhonkwane futhi nini ukuba sizigweme ngazo zonke izindleko kubalulekile. Amazinga athile ezifana Level 77 noma 90.
Futhi hlola Candy Crush umdlalo thwebula!
Papa Pear Saga – Amazinga 16- 22
January 27, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Siyakwamukela ku-Pirates of the Pearibbean! sengiphothule orientation yakho ne owela we ezimazombezombe elinuka Forest wena kahle endaweni okufanele ufike kuyo Papa buciko…kuphela 300 kuxaka go! Kungenzeka Ngathi kuso ngaphambi kodwa lezi amazinga kukhona ngendlela emangalisayo ezibalulekile njengoba isisekelo yokufunda, ngayinye element omusha kuze umdlalo sivela kancane kancane okwenza amazinga ezalandela nzima inselelo fun umsebenzi benamandla nzima ukuthi ushiya ucabangela imiphumela yokudlala kwefoni yakho ichibi duck…yebo kahle thina Wont ukukhuluma ngalokho! ‘
Level 16 ubeka nathi waya ngaleya blue ne umsebenzi okhanyisa lezo amabhakede spunky, nge izingqinamba ezimbalwa endleleni of course. With 90 000 amaphuzu ukuze uthole uya badinga wonke omunye wakho 20 amazambane! I batusa Ekuqaleni kuhloswe eliphezulu futhi kanzima ukuze uthole eminye izikhonkwane umlilo ebhodini bese ashise indlela yakho kwabanye ehloniphekile izibalo
Papa eliphakathi kwe Izinga 111
January 25, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Ngezikhathi nezikhathi (futhi nge njalo okwandayo uma hit ephindwe kathathu) uhlangabezana 'ngesivinini Bump' a Papa Pear. Le Saga is kuqhathaniswa fast kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi ekuqaleni njengoba wena kancane kancane uthole nokujwayela ukuphelelisa Papas akho’ Ijubane and trajectory. Kuyavunywa ezinye Amazinga Kunzima kunabanye kodwa lokhu ngokuvamile kusho awuzange yini uzibonele indlela efanele ukuqeda izinjongo zakho, ezinye zalezi akuzona njengoba siqonde phambili njengoba ukuvela…Kuba amazinga efana 111.
Leli zinga unalo injongo phambili impela iqonde, knock out 45 izaqathe bese uthole okungenani 150 000 amaphuzu ..(sicela dont bayakhohlwa amaphuzu, ngethembe akukho lutho kungakhungathekisa kakhulu kunalokho ekugcineni kokuphuma leso isanqante last isikhathi eside, futhi ekhuphuka iDemo emaphuzwini) kodwa ubuhle kuleli cala aba ukukhohlisa njengoba 111 Kulukhuni! it kudinga ikhono kancane futhi impela cishe eziningi inhlanhla!
Zama wenze ukudala umlilo wakho izikhonkwane kuqala
Into yokuqala kufanele ukwenze enze ezinye izikhonkwane umlilo, Khumbula lokhu kwenziwa ngokufaka oshaya ipheya kusuka kolunye uhlangothi kwesikrini ukuze komunye, kulokhu kubalulekile ukuthi okwenzayo lokhu kuqala ngaphambi afika nopelepele abomvu wabhubhisa. Manje kuhle ungakha izikhonkwane amabili umlilo ngokuqala amandla shot egcwele kwesobunxele phezulu ke amandla ngokushesha full shot kuya kwesokudla phezulu, lokhu Nokho usebenza kuphela uma isikhathi it right ngaphandle kwalokho papas amabili shaya ndawonye njengoba usizi phakathi. Udlale nalokhu shot kuvulwa, ungase wenze ukuba asebenze ngokudubula izikhonkwane amabili kuya kwesokunxele noma kwesokudla. Ngikholelwa ukuthi kokuba umlilo izikhonkwane okungenani ezimbili ebhodini kubalulekile ukuze uphumelele, umlilo izikhonkwane ababili kakade ebhodini ekuqaleni aseduze akwenzeki ukucupha bebodwa kanye nendima okungcono Play ukunweba ipilo zomlilo yakho papa.
Okwenza lokhu ezingeni olukhohlisayo Simane ukuma the izaqathe phakathi izicucu bamboo. Le izaqathe on the emakhoneni ezansi kukhona lula hit uma wenze kusebenze i-pin umlilo ukusula irowu yokuqala ka izithelo futhi crack isikhala ku izaqathe ukucupha pin amabhomu ngaphakathi. A tip Ukugunda ukukhumbula uma wena ishaya pin amabhomu (abanenhliziyo green) nge-papa kakade evuthayo, lokhu papa ke inflates okungaphezu kwalokho ngosayizi ekudaleni nakakhulu indawo ephindwe nekwenyusa amathuba burning up ezinye crunchies orange!
Wafaka Under: Papa Pear Saga Umake With: esiphakamayo, Fire pin, Pin Grenade, Level 111, Papa Pear
Managing Papa Pear yakho abangani Facebook
January 23, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Izaziso ngempela kungangiphazamisi abanye abantu…iziwula!
Weirdly eyanele akuwona wonke uyawuthanda udlala (Ngiyazi kwesokudla?) Eqinisweni kuba khona labo uthole zazo cranky uma isaziso ihlala ekhasini yabo facebook noma * befuzela * shock horror siphelela newsfeed yabo! Okuhle kukhona ezinye izindlela ezinkulu ukuze ondle isidingo sakho izimpilo kanye ezingeni hopping nosizo ngaphandle kahle lezo abangane olubucayi yilezi!
Thola umbimbi akho! Ukuxosha a bizo isimo Facebook phezu kwazo zonke abangane abadlala Papa Pear ukuba memeza futhi ake niyazi, Ngiyazi uhlelo lokusebenza ivame bakha uhlu abantu abadlala (ngubani it ecabanga kumele udlale) kepha lezi Cant kube lathembela ngempela, ikakhulukazi uma umuntu akuyona savvy tech too, Kungenzeka bona ogunyaziwe the game ngephutha ukuzama futhi ukuthola ukuthi siyini. Uzoba ukuqeda impikiswano unomphela nge isimo, uzothola ukuthi ubani odlala futhi udinga izimpilo nababi njengawe, ngubani uyazwelana futhi ezimisele ukusiza (abashisekeli ngokuvamile farmville!) ngubani ngempela akanandaba, like, noma angeke abamele izicelo game…yep banalo indlela nokwazisa abantu ukuthi, NGOKUVAMILE kakhulu!
Uma nazi ngubani bakho beqiniso’ abangani aba bazakhele uhlu smart, ukudala lokhu izilungiselelo zakho zobumfihlo bese wengeza abantu ngokuchofoza 'Mngane’ lokhu uyokunika inketho ukususa noma 'Hlela Abangane uhlu', faka lokhu bese wengeza ukuba ohlwini lwakho smart! ke a yayo udaba simane sikhethe le ndlela lapho ukuthumela ku-Facebook (umphakathi, abangani, abangabajwayele noma GAMERS!)
Ungakwazi wengeze akubo okungahleliwe Papa Pear abalandeli ngokuphepha nge ubeka imingcele yokufinyelela yabo emininingwaneni yakho, aholele ukuze uhlale uhlola izilungiselelo zakho zangasese noma kunjalo!
Uma unenkinga nge okuthunyelwe lokusebenza egameni lakho njalo uma ukufezekisa into
Papa Pear Saga – amazinga 8-15
January 20, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Manje-ke ngeke kube kuhle endaweni okufanele ufike kuyo ukusungula okuhle ifomu Papa nakala, kudinga kancane ukujwayela the yokulawula Papa Kunamagonandoda trajectory yakho kepha maduze ukuthuthukisa ubuciko ngeke kube khona namanje nawe
Pope Pear Saga Amacebo, Interesting
Everybody uthanda a omuhle Saga ilungelo? Futhi Papa Pear akuyona
Papa Pear Saga – Amazinga 1-7, singeniso.
January 18, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Siyakwamukela esigabeni sokuqala uhambo lwakho Papa Pear, noma ngokuthi 'elinuka Forest' yayo eyaziwa. Like nge imidlalo iningi esigabeni sokuqala lunikezelwe wethula nawe ukuba zonke izakhi ezahlukene umdlalo kumele anikele, kanye Onjiniyela at King kukhona ngombono wami ochwepheshe okwalesi! Ukuphasa ukubonisa kancane of konke odinga ukukwazi ngendlela sucks wena kamnandi!
Level 1 futhi nabo Papa Pear, the single hit acorns kanye izaqathi esake esiphundu! Futhi sithola ungaba Kunamagonandoda ezintathu ebhodini kuphela kanyekanye njengoba sizama bathi okungenani 10 000 amaphuzu.
Level 2 amamiksi up ezinye amajikijolo ngezindaba acorns futhi siyaqaphela ukuthi lezi thatha ezintathu hits ukususa, ungakwazi utshele bakuphi kule mjikelezo by umbala wabo. Again kodwana ngokufunda le izindophi njengawe Inhloso yazo ukuthola okungenani 15 000.
Level 3 kuhambisana Ezinye chilis kushisa futhi namanzi njengoba sizama sihlose hle xaxa 18 000 noma ephakeme. Leli zinga sibonisa kungani njalo ukuhlakanipha ukuba aqede konke of isanqante wakho izikhonkwane ekuqaleni, ulahlekelwe lokhu ungqimba phansi ngokushesha futhi nawe ngeke kudingeke bounce off.
Level 4 lets us ukuhlangabezana super cute naphakade Ukugunda amajingijolo squishies. Lezi amagilebhisi ezungezwe izikhonkwane blue yilezi a isimbembembe unomphela ibhodi, ngeke kususwe sidlale indima iwusizo unezela gxuma owengeziwe Papa wakho Kunamagonandoda, funda ukuwasebenzisa ngokuhlakanipha njengoba wena balwela ukuqoqa 15 000 amaphuzu!
Wafaka Under: Papa Pear Saga Umake With: Papa Pear Saga
Papa Pear izikhonkwane – Special esiphakamayo ithini lamapheya
January 16, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
Amanye izikhonkwane Papa asebenzayo!
Papa Pear esiphakamayo izikhonkwane yiwona elingana Candy ochobozayo’ candies akhethekile super inhlanganisela. Thola Papa yakho Pear aphonswe emhlabeni ibhodi in nje ngendlela efanele futhi ngokufanele umvuzo nomunye emihlanu izikhonkwane ezikhethekile ngayinye bezizwe obuhlukile zobuhle! Once on izikhonkwane ibhodi kumele ushayiswe Papa Pear ukuba isebenze, kuye ngokuthi isenzo se-PIN the Pear uyobe ukuthwala isici okuyinto izothatha size burns noma amazwe ku ibhakede
Wafaka Under: Papa Pear Saga Umake With: booster, Papa Pear Saga, Upapa izikhonkwane
Iyini Saga Papa Pear?
January 14, 2014 by Isobella Franks Shiya a Comment
INkosi ayenzile futhi! Baye wakwazi ukudedela omunye futhi game terrifyingly umlutha futhi siphila ukuthi bounces yesokunene isikhungo fun zobuchopho futhi amazwe sijule psyche yakho! ..Well khetha, of kodwa hhayi ngendlela uyinqaba!
Iyatholakala kwi wonke amadivaysi emikhulu
Ubumfihlo & Cookies Policy